China 1000ml lead-free soda ibhodlela ifektri abakhiqizi | Honghui Ingilazi
UKWAKHIWA OKUQHUBEKAYO: Amabhodlela e-Flip-top enziwa ngengilazi ewugqinsi futhi eqinile ukuze amelane ngokuphelele nomthelela nasekushintsheni kwezinga lokushisa. Yenziwe nge-premium quality polypropylene futhi ikepisi yocingo yenziwa ngensimbi engagqwali yokumelana nokugqwala okuhle kakhulu.
I-LEAKPROOF & AIR TIGHT CAP: Isigqoko esivuselelekayo senza isiqiniseko sokuthi okuqukethwe ngaphakathi kuhlala kukusha njengosuku owaligcine ngalo. Isivalo sobufakazi esivuzayo samabhodlela okwenza utshwala kudala umgoqo ongangeni moya ogcina iziphuzo zivaliwe futhi zivimbela i-carbonation kanye nokuvutshelwa.
UKUSETSHENZISWA KONKE: Ibhodlela lengilazi elinesivalo lingasetshenziswa ukugcina yonke into kusuka kumajusi, uviniga, iziphuzo namanzi kuya kuma-oyela, i-kefir, i-kombucha, ubhiya, ubisi, ama-syrups nokunye okuningi. Ngosayizi welitha eli-1, uzoba nokuningi ongakusebenzisa emcimbini olandelayo.
UKUPHEPHA NOKUPHILA KWE-ECO: Amabhodlela e-Swing top awanayo i-BPA futhi aqukethe ubuthi, amakhemikhali, ama-phthalates nomthofu, okwenza kube yindlela ephephe kakhulu kunamabhodlela epulasitiki. Ngokusebenzisa la mabhodlela engilazi avuselelekayo, unganciphisa ukusetshenziswa kwepulasitiki endlini yakho.
Heavy Duty Ukwakhiwa:
Amabhodlela engilazi avuselelekayo enziwa ukuthi ahlale isikhathi eside. Zenziwe ngengilazi eqinile enikeza ukumelana okuphezulu ekushintsheni komthelela nokushisa. Ukuvalwa kwentambo yensimbi engenasici namakepisi we-polypropylene anikezela ukumelana nokugqwala okuhle futhi ngeke kucebe noma kucwebe njenge-chrome.
Kuphephile Kuwe Nomhlaba:
Izinto ezisetshenziselwa ukwenza amabhodlela ethu zingu-100% ezingezona ezinobuthi, ezingaphinde zisebenze futhi ziphephe imvelo. Azinayo i-BPA mahhala, ayiholeli futhi ayinamazinga okwenza kube yisixazululo esiphephile sokugcina uma kuqhathaniswa nepulasitiki. Ngokusebenzisa la mabhodlela engilazi avuselelekayo, unciphisa ukusetshenziswa kwepulasitiki ekhaya lakho.
Indawo Yokuqinisekisa Ephephile Nokuvuza:
Ibhodlela lethu lengilazi elinesivalo likuvumela ukuthi ugcine uwoyela, iziphuzo kanye nalo lonke olunye uketshezi ngokuphepha ngaphandle kokukhathazeka ngokuchitheka okungcolile. Ukuvalwa kocingo kunikeza ukulondolozwa komoya komoya, okwenza kube yisixazululo esifanelekile sokugcina iwayini, izinongo nesinongo
I-SECURE, CAP LEAKPROOF CAP: Ibhodlela ngalinye lengilazi liza nopulasitiki ophathekayo nosimende ongavimba ibhodlela lakho ngokuqinile. Ama-gaskets ethu angangeni emoyeni aqinisekisa ukuthi iziphuzo zakho ngeke zixube futhi zizohlala zintsha futhi zimnandi isikhathi eside. Ofeleba kulula ukususa nokugqoka.
UKUPHELELE KOKUSETSHENZISWA KWEZININGI: Sebenzisa ibhodlela lakho lengilazi ngesitobha ukugcina uwoyela, i-kefir, iziphuzo, i-kombucha, i-Vinegar, i-Beer, i-Water noma i-Soda. Slayida kukepisi engangeni ukuze ulondoloze futhi ugcine ukusha kweziphuzo zakho neziphuzo zakho ozithandayo.
EQINISEKILE, IKHWALIDI ELIPHAKEME NGOKUPHAKATHI: Uma kungena, la mabhodlela eBrewing enziwe ngengilazi eqinile, ecacile; ilungele ukusetshenziswa okuhlala isikhathi eside, okuphindaphindwayo. Umklamo wethu omncane wentamo uvumela ukuthululela kalula ngaphandle kokuchitheka okungafuneki. Akukho okunye okungcono!
JABULA UKUSETSHENZISWA KWEZINGOZI: Wonke amabhodlela ethu ajika phezulu yi-BPA, ubuthi, amakhemikhali futhi awunamthofu. Manje usungagcina uwoyela wakho, iziphuzo noma amanzi ngaphandle kokukhathazeka ngokungcoliswa. Kutholakala kusethi engu-6, siqinisekise ukuthi uzoba namabhodlela anele ongawasebenzisa.
IPREMIUM HEAVY-DUTYN DESIGN: Ngomzimba wengilazi onamandla amakhulu futhi obukhulu, amabhodlela ethu eFlip Top akhiwe ukuze anikeze ukumelana okuphezulu ekushintsheni kwezinga lokushisa nomthelela wengozi. Ukuze uhlanze, mane ubeke ibhodlela lakho kumshini wokuwasha izitsha.
Langaphambilini 1000ml ecacile ingilazi isiphuzo ibhodlela
Olandelayo: Ugebhezi lwesiphuzo esikhanyayo
Carbonated Isiphuzo Bottle
Glass Isiphuzo Amabhodlela
Ibhodlela Lamanzi Ngeziphuzo Ezihlanganisiwe
Ibhodlela lesiphuzo elikhanyayo elingu-150ml
50ml plastic cap isiphuzo ibhodlela
Ibhodlela lesiphuzo sepulasitiki le-1000ml ~ 750ml
100ml Isiphuzo ibhodlela
500ml ukhokho cap isiphuzo ibhodlela
1000ml insimbi engagqwali embozwe isiphuzo ibhodlela